As of Thu, 17 Oct, 2019 11:25
AKBSL 414.00 ( 20 ) (0) AKPL 133.00 ( 40 ) ( -1 ) CCBL 154.00 ( 50 ) ( -1 ) CMF1 8.82 ( 1100 ) (0) CORBL 104.00 ( 500 ) ( -1 ) EBL 550.00 ( 200 ) (4) GBLBS 312.00 ( 175 ) ( -3 ) GFCL 135.00 ( 70 ) (4) GMFBS 460.00 ( 30 ) (0) HDL 1,450.00 ( 20 ) ( -11 ) HPPL 141.00 ( 120 ) (0) ILBS 421.00 ( 20 ) (0) JFL 198.00 ( 20 ) (3) KPCL 79.00 ( 10 ) (0) MEGA 196.00 ( 65 ) ( -1 ) MSLB 909.00 ( 177 ) ( -19 ) MSMBS 493.00 ( 22 ) (6) NABIL 762.00 ( 120 ) (0) NIBSF1 8.36 ( 10000 ) ( 0.01 ) NIL 370.00 ( 10 ) (7) NLG 572.00 ( 50 ) ( 8 ) NLIC 769.00 ( 115 ) ( -1 ) NTC 647.00 ( 20 ) ( 24 ) PCBL 264.00 ( 27 ) ( -1 ) RADHI 148.00 ( 10 ) (2) RHPL 162.00 ( 1660 ) ( 1 ) RRHP 103.00 ( 10 ) (0) SBL 299.00 ( 10 ) (5) SHIVM 490.00 ( 200 ) ( -4 ) SJCL 170.00 ( 240 ) ( 1 ) SMFBS 771.00 ( 10 ) ( -9 ) SPARS 534.00 ( 30 ) (0) SRBL 239.00 ( 299 ) (0) UPPER 234.00 ( 342 ) ( -4 )
युवा व्यवसायीको बाख्रापालन
अधिकांश नेपाली युवाको चाहना हुन्छ– पढाइ सकेपछि कुनै जागिर खाने । जागिर नपाए उनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान तयार हुन्छन् । तर, धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिका–४ का युवा मेघराज खतिवडा भने बाउबाजेले थालेको परम्परागत बाख्रापालन व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै व्यावसायिक बनाउन तल्लिन भएका छन् ।
शिशु स्याहार केन्द्र स्थापनाले महिलालाई राहत
बिहानीको कामलाई पन्छाउँदै खाना खाएपछि नानीलाई शिशु हेरचाह केन्द्रमा पु¥याएर व्यवसायमा लाग्छिन् प्रतीक्षा लिम्बू । मेन्छ्यायेम गाउँपालिका पौठाककी ३१ वर्षीया प्रतीक्षा नानीलाई केन्द्रमा पु¥याएर ढाका व्यवसायमा लाग्दै आएकी छन् ।
चरेश तस्करीमा विप्लवका कार्यकर्ता
नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता १ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिवन्धित लागूऔषध चरेश सहित पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी (धादिङ)बाट खटिएको प्रहरीले विप्लव समूहका ४ जना कार्यकर्तालाई १ सय ७० केजी चरेश सहित पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार चरेशको प्रतिवन्धित बजारमूल्य ४० हजार देखि ६० हजार रुपैयाँ सम्म पर्छ ।
सर्वाेच्च अदालतले भक्तपुर कटुन्जेका आधा दर्जन घर भत्काउन डोजर नलगाउन आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासबाट साविक कटुन्जे वडा नं. २ को हाल सूर्वविनायक नगरपालिका वडा नं. ५ अन्तर्गत रहेका एक दर्जन भन्दा बढी घरधुरीलाई असर पर्नेगरी डोजर नचलाउन आदेश दिएको हो ।
३२ नगरपालिकामार्फत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम
सरकारले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ३२ वटा नगरपालिकामार्फत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि सोहीअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ता सचेतनाका लागि तालिम दिइन लागेको हो ।
नेपाली अर्थतन्त्रको ‘लाइफलाइन’को रूपमा चिनिने वीरगन्जलाई तस्करहरूले लागूऔषधको ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ६ वर्ष अघिसम्म प्रतिबन्धित लागू औषध गाँजाको खेती नै हुने पर्सामा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले निर्मूल पारे पनि अहिले भारतबाट आउने लागूऔषध इन्जेक्सन ट्याब्लेट र नेपालबाट भारततर्फ जाने गाँजा अफिमको तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको छ ।
आठ वर्षपछि सञ्चालन भयो लोपोन्मुख नाच पुलुकिसी प्याखँ
आठ वर्षपछि मध्यपुरथिमिमा मल्लकालीन पुलुकिसी प्याखँ (ऐरावत हात्ती नाच) पुनः सञ्चालनमा आएको छ । अर्थ अभावका कारण रोकिएर लोप हुने अवस्थामा पुगेको पुलुकिसी प्याखँ मध्यपुर थिमि–३ स्थित स्थानीय सागबारी टोलका युवाको सक्रियतामा यस वर्ष पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो । मध्यपुरथिमिमा पुलुकिसी प्याखँ भिमा एकादशीको दिन प्रदर्शन गरिन्छ ।
राजापुरमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुरु
बर्दियाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र राजापुर बजारमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन राजापुरमा बहाल बिटौरीमा जग्गादर्ता समितिको कार्यालय खुलेर जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारको मुद्दा
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माको करिव साढे ४ करोड सम्पत्ति अवैध रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको हो ।
रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सारिएपछि आन्दोलन चर्कंदै
राजतन्त्रदेखि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि रुकुम पूर्वको रुकुमकोट सरकारबाट पीडित बनेको छ । सुरुमा रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट नै थियो । तर २०३० सालमा रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकाम राजनीतिक पहुँचको आधारमा एकाएक मुसिकोटमा सारिएपछि पीडित बनेको रुकुमकोट ४४ बर्ष पछि खुसी त बन्यो तर खुसी ५ महिना पनि टिक्न पाएन ।